Musharaxa Madaxweynaha Avv C/raxmaan C/shakuur oo Kulan la qaatay Bahda Saxaafada Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Musharaxa Madaxweynaha Avv C/raxmaan C/shakuur oo Kulan la qaatay Bahda Saxaafada Musharaxa xilka madaxweyne ee Soomaaliya Avv C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa caawa munaasabad Afur ah u sameeyey suxufiyiinta ka hawlgala magaalada Muqdisho. Kulanka oo ka dhacay Xarunta Olalaha Musharaxa ee Muqdisho ayaa waxaa kasoo qaygalay agaasimayaasha idaacadaha, Taleefishanada iyo suxufiyiinta ka hawlgala qaybaha kala duwan ee warbaahinta ayaa musharaxu ku dheeratay ahmiyada saxaafada, xuquuqda saxafiga iyo masuuliyada bahda warbaahinta, isagoo sheegay in saxaafadu tahay awooda afraad ee dawlada.
Musharaxa ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la helo saxaafad gutada kaalintii looga baahnaa ee 1- Gudbinta xogta, 2- Wacyigelinta Bulshada iyo 3- Maaweelinta dadwaynaha, isagoo sheegay in ay laga maarmaan tahay in xogtu ay ku dhisnaato dhexdhexaadnimo, masuuliyad iyo xaqiiqo. Wuxuu kaloo musharaxu si kulul u canbaareeyey dilalka, handaada, cagajuglaynta lagula kaco suxufiga, isagoo dhinaca kale sheegay in looga baahan yahay suxufiyiinta in ay waajibkooda u gutaana si masuuliyad qaran ku dheehantahay.
Wuxuu dhinaca kale sheegay in hadii la doorto uu si wayn u ahmiyad wayn siin doono saxaafada islamarkaana uu mudnaanta koowaad siin doono meelmarinta sharciga saxaafada, kaasoo ay kawada shaqeeyaan Bahda Saxaafada, Bulshada Rayadka ah iyo dawlada intaba. Musharaxa C/raxmaan C/shakuur ayaa isagu horay uga soo shaqeeyey qaybo ka mid ah warbaahinta laguna tilmaama inuu yahay nin saxiibtinimo kala dhaxayso saxaafada. Xaafiiska Wararka Warlalis.com